सैलोनिस्ट स्पा र सैलून प्रबन्धन प्लेटफर्म: नियुक्तिहरू, इन्भेन्टरी, मार्केटिंग, पेरोल, र अधिक | Martech Zone
सैलोनिस्ट एक सलुन सफ्टवेयर हो जुन स्पा र सैलुनहरू पेरोल, बिलि,, तपाईंको ग्राहकहरूलाई संलग्न गराउन, र मार्केटिंग रणनीतिहरू कार्यान्वयन गर्न मद्दत गर्दछ। सुविधाहरू समावेश:
स्पा र सैलुनहरूको लागि नियुक्ति सेटिंग
अनलाइन बुकिंग - स्मार्ट सलोनिस्ट अनलाइन बुकिंग सफ्टवेयर प्रयोग गरेर, तपाइँका ग्राहकहरूले अनुसूचित गर्न, पुनः शेड्यूल गर्न वा उनीहरू जहाँ कहीं भेटघाट रद्द गर्न सक्छन्। हामीसँग दुबै वेबसाइट र अनुप्रयोग क्षमताहरू छन् जुन फेसबुक र इन्स्टाग्राम सोशल मिडिया ह्यान्डलहरूको साथ एकीकृत गर्न सकिन्छ। यसको साथ, समग्र बुकिंग प्रक्रिया पूर्ण रूपमा स्वचालित हुन्छ। कुनै डबल बुकिंग छैन। सलोनिस्टसँग नो-शो गर्न बिदा।
स्लट ब्लकरहरू - तपाईंको क्यालेन्डरमा अनुपलब्ध समय स्लटहरू दिएर स्टाफ र ग्राहकहरूको समय बर्बाद गर्न रोक्नुहोस्। अनलाइन बुकिंगका लागि स्लट ब्लकरहरूसँग, तपाईंसँग मात्र उपलब्ध स्लटहरू देखाउन शक्ति छ, जुन एक निश्चित समय सीमा भित्र अत्यधिक अपोइन्टमेन्ट बुकिंग प्रतिबन्धित गर्दछ।
अफ-घण्टा बुकिंग - तपाइँको ग्राहकहरुलाई एक नियत सफ्टवेयर प्रयोग गरी, भेटघाट बुक गर्न पनि अधिक लचकता दिनुहोस्। उत्तम सैलुन सफ्टवेयरको साथ तपाईको अफिस हुँदा पनी तपाइँको व्यवसायले निरन्तरता दिन सक्छ। सलोनिस्ट तपाईंको ग्राहकको आवत सुसंगत राख्नको लागि डिजाइन गरिएको छ, जबकि उनीहरू कुनै पनि समयमा र जहाँसुकै सुविधाको हिसाबले बुक गर्छन्।
प्याकेज बुकिंग - सुविधाजनक समूहहरूमा विभिन्न सेवाहरूको लागि प्याकेजहरू सिर्जना गर्न स्वतन्त्रताको आनन्द लिनुहोस्। यस ग्राहक व्यवस्थापन सफ्टवेयरको साथ तपाई आफ्नो स्टुडियोमा बिक्री र राजस्व बढाउन सक्नुहुन्छ ग्राहकहरु लाई आफ्नो प्राथमिकतामा आधारित बुकि place राख्न को लागी सहज गरी। सलोनिस्ट सैलुन सफ्टवेयर तपाईका ग्राहकहरूको वफादारी बढाउनको लागि पनि उत्कृष्ट छ उनीहरूको औंलाको टोकरीमा निर्बाध सैलुन प्याकेजहरू।
सदस्यता बुकिंग - तपाइँको ग्राहकहरुलाई सदस्यता अनलाइन बुकिंग र समय तालिका को उपयोग गरी वफादार रहन प्रोत्साहन दिनुहोस्। सलोनिस्टमा, सैलून मालिकहरूले एक वफादारी कार्यक्रम चलाउन सक्छन् जसले सदस्यहरूलाई विशिष्ट सेवाहरूको लागि छुट दिन्छ। यो सालुन बृद्धि ड्राइभ र ग्राहक प्रतिधारण दर वृद्धि प्रमाणित भएको छ।
भुक्तानी स्वीकार गर्नुहोस् - यो सबै भन्दा राम्रो सैलून सफ्टवेयर हुनु कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ जसले भुक्तानीलाई एक ब्रीज स्वीकार गरेर बनाउँदछ? सैलोनिस्ट एक अनलाइन बुकिंग विजेटको साथ आउँदछ पेपैल, स्ट्राइप, र आधिकारिक। नेट। सैलून मालिकहरूले हाम्रो सेवाहरू सफ्टवेयरमा यस विजेटको साथ खरीदहरू केवल सिन्क्रोनाइज गरेर तपाईंको सेवाहरूको लागि भुक्तानीहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्। तपाईं हाम्रो एकीकृत पोइन्ट अफ सेलको साथ सबै प्रकारका भुक्तानहरू स्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ।
स्पा र सैलुनहरूको लागि मार्केटिंग
इमेल मार्केटिङ - सालोनिस्ट को ईमेल मार्केटि सेवाहरु को उपयोग गरी कम से कम पाँच मिनेट मा सालगिरह अभिवादन, सदस्यता योजनाहरु, र नियुक्ति पुष्टिकरण पठाउनुहोस्। ईमेल मार्केटि a्ग तपाइँको सैलुन र स्पा सेवाहरु को लागी नियुक्तिहरु लाई बढाउन को लागी एक महान तरीका हो। Salonist सबै ग्राहक अवधारण दर सुधार र तपाइँको कम्पनी को लागी उच्च राजस्व उत्पन्न गर्ने बारे मा छ।
समीक्षा व्यवस्थापन - समीक्षाहरू विश्वलाई देखाउनको लागि उत्तम तरीका हो कि तपाईं केहि सही गर्दै हुनुहुन्छ। यसले तपाईंलाई अधिक ग्राहकहरूलाई वफादार रहँदा उनीहरूलाई सुरक्षित गर्न मद्दत गर्दछ। सैलोनिस्ट अपोइन्टमेन्ट समय तालिका सफ्टवेयरले तपाईंलाई तपाईंको उत्पादनहरू र सेवाहरूमा तपाईंको ग्राहकहरूबाट वास्तविक-समय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न सक्षम गर्दछ। उचित ग्राहक व्यवस्थापनको लागि उनीहरूको स्मार्टफोनमा एसएमएस र ईमेल मार्फत पठाइएको प्रम्प्टहरूको साथ, तपाईं आफ्ना ग्राहकहरूसँग जडित रहन सक्नुहुनेछ।
कुपन व्यवस्थापन - यदि त्यहाँ ग्राहकहरु लाई माया को लागी एक चीज छ, यो नि: शुल्क सेवाहरु। तपाइँको ग्राहकहरुलाई पुरस्कृत गर्नुहोस् उनीहरूको संरक्षणका लागि सबै नवीकरण अर्डरहरूमा छुट र कुपन प्रस्तावको साथ। त्यहाँ कुनै जटिल प्रक्रिया शामिल छैन। तपाइँ यो सही स्मार्ट सैलुन सफ्टवेयरमा उत्पन्न सैलून र स्पा छुट कूपन ट्याबबाट प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँको क्लाइन्ट छूट को एक एर्रे संग आउँदै राख्नुहोस्।
उपहार कार्ड - तपाइँका ग्राहकहरु लाई विशेष अवसरहरु मा तपाइँको सेवाहरु संग उनीहरु लाई उपहार को अवसर दिनुहोस्। यो एक वार्षिकोत्सव वा जन्मदिन उत्सव हो, सलोनिस्टमा एक निजीकृत उपहार कार्डले तपाईंलाई सम्भावित ग्राहकहरूसँग व्यस्त हुन मद्दत गर्दछ। प्लेटफर्मले तत्काल तिनीहरूलाई ईमेल वा SMS मार्फत सूचित गर्दछ।
वफादारी प्रणाली - ग्राहक व्यवस्थापन मार्फत वफादारी कार्यक्रमहरु तपाइँको ग्राहकहरु को लागी अर्को ठूलो पुरस्कार प्रणाली हो। यसले उनीहरूको भ्रमणको फ्रिक्वेन्सी सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। सलोनिस्ट सफ्टवेयर जाँच गर्नुहोस् वफादारी कार्यक्रमहरूमा सजिलो पहुँचको लागि छिटो तपाईंको ग्राहक रेफरल्स, सगाई, र सुरक्षा बढावा।
SMS अभियानहरू - तपाइँको ग्राहकहरु बाट कुनै शो को संभावना लाई कम गर्नुहोस्। सैलोनिस्ट तपाईंलाई उनीहरूसँग सम्पर्कमा रहन मद्दत अनुस्मारकहरू, ग्राहक सment्लग्नता, प्रचार अभियानहरू, र अधिकको माध्यमबाट। तपाईंको ग्राहकहरूको साथ कुराकानीमा प्रवेश गरेर र उनीहरूले के चाहन्छन् भन्ने कुरालाई थाँहा गरेर तपाईंको सैलुन व्यवसाय बढाउनुहोस्।
नियुक्ति सेटिंग र मार्केटि toका साथै, सैलोनिस्ट ग्राहक प्रबन्धन, प्रीपेड अपोइन्टमेन्टहरू, सूची प्रबन्धन, खर्च प्रबन्धन, स्थान प्रबन्धन, अनलाईन स्टोर, एनालिटिक्स, बिक्री विन्दु, मोबाइल अनुप्रयोग, अनलाइन फारम, र विस्तृत रिपोर्टहरू पनि समावेश गर्दछ। यस सैलुन सफ्टवेयरमा तपाईलाई राजस्व बृद्धि गर्न, समय बचत गर्न, ब्रान्डको दृश्यता बढाउन, र सौन्दर्य उद्योगमा स्मार्ट निर्णयहरू लिन सबै आवश्यक छ। यस सबैभन्दा मनपर्ने उपकरणको सुविधाहरूको अन्वेषण गर्नुहोस् र तपाईंको व्यवसायलाई अझ राम्रो बनाउनको लागि तयार हुनुहोस्।
सलोनिस्टको साथ सुरू गर्दै
तिनीहरूको ग्राहकमा नाई पसल, कपाल सैलुन, मसाज थेरापिस्ट, नेल सैलून, स्पा, दुलही सलून, मेडिकल स्पा सफ्टवेयर, सौंदर्य स्किनकेयर, ट्याटु कलाकार, बुथ भाडा, टेनिंग सलुन, र घरपालुवा जनावरका ग्रूमरहरू सामेल छन्।
खुलासा: म एक सम्बद्ध हुँ सैलोनिस्ट.
टैग: सौन्दर्य स्किनकेयरविश्लेषणभेट सेटिंगनाई पसलबुथ भाडामा लिनेहरूदुलही सैलुनग्राहक व्यवस्थापनखर्च व्यवस्थापनकपाल सैलुनसूची व्यवस्थापनस्थान प्रबन्धनमालिश थेरापिस्टहरूमेडिकल स्पा सफ्टवेयरमोबाइल अनुप्रयोगनेल सलुनहरूअनलाइन फारमहरूअनलाइन स्टोरघरपालुवा जनावरहरूबिक्री को बिन्दुस्थानप्रीपेड अपोइन्टमेन्टहरूसैलुन मार्केटिस्पाकमाना सैलुनट्याटु कलाकारहरू